Union Minister for International Cooperation participated at the High-Level Segment of the 37th Session of the Human Rights Council held in Geneva – Ministry of Foreign Affairs
The Myanmar delegation led by U Kyaw Tin, Union Minister for International Cooperation arrived back Yangon on3March after attending the High-Level Segment of the 37th Session of the United Nations Human Rights Council held from 26 to 28 February 2018 in Geneva, Switzerland.
At the High-Level Segment of the Human Rights Council held on 27 February, Union Minister U Kyaw Tin deliveredaStatement apprising the meeting of the complexities of Myanmar’s democratic transition and the situation in Rakhine State. In his statement, the Union Minister mentioned that despite many daunting challenges facing Myanmar, the international community focused most on the situation in Rakhine State, as the media incessantly portrays it asareligious issue. In fact, the Rakhine issue is notareligious one butapolitical and economic challenge involving migration, competition over limited resources, poverty and rule of law. But it has recently evolved from the communal conflict into the issues of national security and terrorism. State Counsellor Daw Aung San Suu Kyi has taken immediate proactive steps including setting up of Dr. Kofi Annan Advisory Commission to resolve the complex issue of Rakhine State soon after taking office. The government’s efforts are gaining momentum with the international community responding positively when the armed attacks against three police outposts occurred in early October 2016 and changed the situation completely. Again on 25 August 2017, within hours after the release of the final report of Dr. Kofi Annan Advisory Commission, the so-called “ARSA” launched orchestrated attacks on 30 police outposts and the Regimental Headquarters leaving multiple deaths and injuries on security personnel and civilians. The security forces have no choice but to suppress terrorism and to restore law and order and protect the innocents. Muslim population in affected areas of Rakhine State crossed the border out of fear of conflict and violence. However, many Muslim villages remained intact. Little is known or reported in the media about many people of Daingnet, Mro, the Mramagyi and Rakhine minority groups and Hindus who have had to flee their homes asaresult of violence. Instigation, threats and false hopes given by ARSA also playarole in the mass displacement of people. As the International Crisis Group (ICG) reported, ARSA attacks were intended asaprovocation. It was those terrorist attacks that triggered humanitarian crisis. Yet, many conveniently failed to denounce provocative attacks. Any form of terrorist act for whatever cause should not be condoned.
The Union Minister added that as Myanmar government is giving priority for the repatriation of the displaced people, significant progress has been made in the preparation process. Humanitarian assistance has been provided to all affected communities through Red Cross Movement and ASEAN Coordinating Center for Humanitarian Assistance on Disaster Management (AHA Center). FAO and WFP have also joined in this effort. The government is making progress in implementing the recommendations of Dr. Kofi Annan Commission asaroad map, the Ministerial Committee assigned to this task has recently issued its first progress report to the public. Withaview to granting more access, Myanmar government has organized day-trips to Rakhine State in three groups for all diplomatic corps including UN agencies to see for themselves the ground situation and its readiness for repatriation. Myanmar government recently invited UNHCR and UNDP to jointly assist the Government’s efforts in carrying out livelihood development for all communities in Rakhine State and for repatriation and resettlement of the displaced persons respectively.
The Union Minister then stressed that in suppressing the terrorists who used civilian recruits, it might cause collateral damage and civilian casualties. With regard to alleged human rights violations, the government shall never condone impunity and action will be taken against any perpetrators in accordance with the law if there is concrete evidence. Myanmar strongly objects the use of such words as ethnic cleansing and genocide in reference to the situation in Rakhine State. Myanmar would welcome the international community to playaconstructive role in relation to Rakhine State and sought their understanding on the complexity and their support for the government efforts in findingadurable solution. Taking non-constructive measures would be counterproductive, as it will further polarize the communities and undermining the efforts for the long-term objective of reconciliation. The Union Minister concluded by stressing that Myanmar is facing the most challenging time in its history of transition, but the government will turn the challenges into opportunities for national reconciliation and peace leading to further strengthening democracy and expressed its belief that the success of democratic transition will overcome these challenges.
While in Geneva on 26th February, the Union Minister also attended the High-Level Segment of the Committee on Disarmament and deliveredastatement sharing Myanmar”s views on nuclear disarmament and non-proliferation.
On 27th February, Union Minister U Kyaw Tin, accompanied by Permanent Representative to the UN / Ambassador U Htin Lynn, met with Mr. Manabu Horii, Vice Minister for Foreign Affairs of Japan, and Lord Ahmad of Wimbledon, Minister of State for Foreign and Commonwealth Office of the UK at the United Nations separately. During the meetings, the Union Minister explained the government’s efforts to resolve the situation in Rakhine State. The Union Minister also heldameeting with Mr. Peter Maurer, President of the International Committee of Red Cross (ICRC), and exchanged views on strengthening of ICRC’s assistance on Myanmar government’s humanitarian efforts.
On 28 February, Union Minister U Kyaw Tin and Mr. Johannes Matyassy Assistant Secretary of the Federal Department of Foreign Affairs of the Swiss Confederation held the 2nd Meeting of Myanmar-Switzerland Foreign Office Consultations in Bern. During the meeting, matters pertaining to the bilateral, political and economic cooperation, promotion of cooperation projects under the new cooperation strategy of Switzerland on Myanmar (2019-2023), Switzerland”s enhanced engagement with ASEAN as well as providing humanitarian assistance and repatriation and development in Rakhine State.
(၃၇) ကြိမ်မြောက် လူ့အခွင့်အ‌‌ရေးကောင်စီ၏ အဆင့်မြင့်ကဏ္ဍ အစည်းအဝေးသို့ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးကျော်တင် တက်ရောက်ခဲ့ပြီး၊ ရခိုင်ပြည်နယ်အရေးကိစ္စနှင့်ပတ်သက်၍ ရှင်းလင်းပြောကြားခဲ့ခြင်း
အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးကျော်တင် ခေါင်းဆောင်သည့် မြန်မာ ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့သည် ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံ၊ ဂျီနီဗာမြို့ တွင် ၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ ဖေဖော်ဝါရီလ ၂၆ ရက်မှ ၂၈ ရက်နေ့အထိ ကျင်းပခဲ့သည့် ကုလသမဂ္ဂ လူ့အခွင့်အ‌‌ရေးကောင်စီ၏ (၃၇) ကြိမ်မြောက် အဆင့်မြင့်ကဏ္ဍအစည်းအဝေး (High-Level Segment) သို့ ပါဝင် တက်ရောက်ခဲ့ပြီး မတ်လ ၃ ရက်နေ့တွင် ရန်ကုန်မြို့သို့ ပြန်လည်ရောက်ရှိ ခဲ့သည်။
ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးကျော်တင်သည် ဖေဖော်ဝါရီလ ၂၇ ရက်နေ့တွင် ကျင်းပသည့် ကုလသမဂ္ဂ လူ့အခွင့်အ‌‌ရေးကောင်စီ၏ အဆင့်မြင့်ကဏ္ဍအစည်းအဝေးတွင် မိန့်ခွန်းတစ်ရပ် ပြောကြားခဲ့ရာ မြန်မာနိုင်ငံ၏ သိမ်မွေ့နက်နဲရှုပ်ထွေးသည့် ဒီမိုကရေစီ အသွင် ကူးပြောင်းမှု အခြေအနေနှင့် ရခိုင်ပြည်နယ်၏ ဖြစ်ပေါ်တိုးတက်မှုတို့ကို ရှင်းလင်းပြောကြားခဲ့သည်။
ယင်းသို့ ပြောကြားရာတွင် ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးမှ နိုင်ငံတွင်း၌ စိန်ခေါ်မှုပြဿနာ အများအပြား ရင်ဆိုင်နေရသော်လည်း၊ ရခိုင်ပြည်နယ်အရေးကိစ္စအား သတင်းမီဒီယာများက ဘာသာရေးပြဿနာအဖြစ် စဉ်ဆက်မပြတ် ပုံဖော်နေကြခြင်းကြောင့် နိုင်ငံတကာ အသိုက်အဝန်းအနေဖြင့် ရခိုင်အရေးကိစ္စကိုသာ အဓိကအာရုံစိုက်နေကြကြောင်း၊ ရခိုင်ပြည်နယ်အရေးကိစ္စသည် ဘာသာရေးပြဿနာ တစ်ရပ်မဟုတ်ဘဲ တရားမဝင် ဝင်ရောက်မှု၊ သဘာဝသယံဇာတများ ပိုင်ဆိုင်နိုင်ရေး ပြိုင်ဆိုင်ကြိုးပမ်းမှု၊ ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှုနှင့် တရား ဥပဒေစိုးမိုးမှုတို့ ပါဝင်ပတ်သက်နေသည့် နိုင်ငံရေးနှင့် စီးပွား‌ရေး ပြဿနာရပ်များသာ ဖြစ်ကြောင်း၊ ယင်းမှာ နိုင်ငံ၏ လုံခြုံရေးနှင့် အကြမ်းဖက်မှု ပြဿနာအသွင်သို့ ယခုအခါ ပြောင်းလဲရောက်ရှိလာကြောင်း၊ နိုင်ငံတော်၏ အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်အနေဖြင့် တာဝန်များ စတင်ထမ်းဆောင်ချိန်မှစ၍ ရခိုင်ပြည်နယ်အရေးကိစ္စအား ဖြေရှင်းရေးအတွက် ကိုဖီအာနန် အကြံပေးကော်မရှင် တည်ထောင်ခြင်း အပါအဝင် လုပ်ငန်းအစီအစဉ်များကို ချက်ချင်းချမှတ်ဆောင်ရွက်ခဲ့ကြောင်း၊ အစိုးရ၏ ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်ချက်များ အရှိန်အဟုန် ရရှိလာပြီး နိုင်ငံတကာအသိုက်အဝန်းမှ အပြုသဘော တုံ့ပြန်မှုများ ရရှိနေချိန်တွင် ၂၀၁၆ ခုနှစ်၊ အောက်တိုဘာလ လဆန်းပိုင်း၌ ရဲကင်း စခန်း (၃)ခုကို တိုက်ခိုက်မှုများ ဖြစ်ပေါ်လာမှုကြောင့် ရခိုင်ပြည်နယ် အခြေအနေမှာ လုံးလုံးလျားလျား ပြောင်းလဲသွားခဲ့ကြောင်း၊ ၂၀၁၇ ခုနှစ်၊ သြဂုတ်လ ၂၅ ရက်နေ့တွင် ကိုဖီအာနန် အကြံပေးကော်မရှင်၏ နောက်ဆုံးအစီရင်ခံစာ ထုတ်ပြန်ပြီး နာရီပိုင်းအတွင်း ARSA အကြမ်းဖက်အဖွဲ့မှ လုံခြုံရေးစခန်း (၃၀) နှင့် ရဲတပ်ရင်းဌာနချုပ်တို့ကို တစ်ပြိုင်တည်း တိုက်ခိုက်မှုများ ပြုလုပ်ခဲ့သဖြင့် လုံခြုံရေး တပ်ဖွဲ့များနှင့် အရပ်သားများစွာ သေကြေထိခိုက် ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ကြောင်း၊ ထို့ကြောင့် လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့များအနေဖြင့် အကြမ်းဖက်မှုများကို နှိမ်နင်းရန်၊ တရားဥပဒေ စိုးမိုးမှုရှိရေးနှင့် အပြစ်မဲ့ပြည်သူများအား ကာကွယ်ရန်အတွက် ဆောင်ရွက်ခဲ့ရကြောင်း၊ အကြမ်းဖက်မှုဖြစ်စဉ် များအပေါ် စိုးရိမ်ထိတ်လန့်မှုများကြောင့် မူဆလင်ရွာသားများသည် နေရပ်စွန့်ခွာပြီး၊ နယ်စပ်ဖြတ်ကျော် ထွက်ခွာခဲ့ကြကြောင်း၊ သို့သော်လည်း မူဆလင်ကျေးရွာ အများအပြားမှာလည်း အေးချမ်းစွာ ဆက်လက်နေထိုင်နေကြဆဲဖြစ်ကြောင်း၊ တစ်ချိန်တည်းမှာပင် ဒေသခံတိုင်းရင်းသားများဖြစ်သည့် ဒိုင်းနက်၊ မြို၊ သက်၊ မရမာကြီးနှင့် ရခိုင်လူနည်းစု တိုင်းရင်းသားများ၊ ဟိန္ဒူဘာသာဝင်များ နေရပ်ပြောင်းရွှေ့ခဲ့ရမှုများကိုမူ သတင်းမီဒီယာများတွင် ဖော်ပြကြခြင်းမရှိကြောင်း၊ ARSA အဖွဲ့၏ လှုံ့ဆော်မှု၊ ခြိမ်းခြောက်မှုများနှင့် မမှန်ကန်သော မျှော်လင့်ချက်များပေးမှုသည်လည်း လူအများအပြား နေရပ်စွန့်ခွာရခြင်း၏ အကြောင်းရင်းတစ်ခုဖြစ်ကြောင်း၊ International Crisis Group (ICG) ၏ အစီရင်ခံစာတွင် ဖော်ပြထားသကဲ့သို့ ARSA ၏ တိုက်ခိုက်မှုများသည် လုံခြုံရေး တပ်ဖွဲ့ဝင် များမှ တုန့်ပြန်လာစေရန် တမင်ရည်ရွယ်၍ ရန်စတိုက်ခိုက်ခြင်း ဖြစ်ကြောင်း၊ ယင်းအကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်မှုများကြောင့် လက်ရှိကြုံတွေ့ နေရသည့် လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဆိုင်ရာ အခက်အခဲများ ဖြစ်ပေါ်လာရခြင်းဖြစ်ကြောင်း၊ သို့ရာတွင် အများစုမှာ အကြမ်းဖက် တိုက်ခိုက်မှုများကို ရှုတ်ချဝေဖန်မှုများ ပြုလုပ်ခြင်း မရှိကြကြောင်း၊ အကြမ်းဖက်မှုဟူသမျှ မည်သည့်ရည်ရွယ်ချက်၊ မည်သည့်ပုံစံဖြင့် ဖြစ်စေ ပြုလုပ်လာပါက ခွင့်ပြုလက်ခံရန် မသင့်ကြောင်း၊ မြန်မာအစိုးရအနေဖြင့် နေရပ်မှ စွန့်ခွာသူများကို ပြန်လည်လက်ခံရေးအပေါ် ဦးစားပေးဆောင်ရွက်လျက်ရှိရာ သိသာထင်ရှားသည့် တိုးတက်မှုများ ရရှိနေကြောင်း၊ လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဆိုင်ရာ အကူအညီများကို ကြက်ခြေနီလှုပ်ရှားမှုနှင့် အာဆီယံ လူသားချင်း စာနာထောက်ထားမှုဆိုင်ရာ ညှိနှိုင်းရေး ဗဟိုဌာနတို့မှတစ်ဆင့် ပံ့ပိုး ပေးလျက်ရှိပြီး၊ FAO နှင့် WFP အဖွဲ့တို့နှင့်လည်း ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်လျက် ရှိကြောင်း၊ အစိုးရအနေဖြင့် ကိုဖီအာနန် အကြံပေး ကော်မရှင်၏ အကြံပြုချက်များကို လမ်းပြမြေပုံတစ်ရပ်အဖြစ် အကောင်အထည်ဖော်လျက်ရှိရာတွင် တိုးတက်မှုများ ရရှိနေကြောင်း၊ အဆိုပါ လုပ်ငန်းစဉ်များ အကောင်အထည်ဖော်ရေးအတွက် တာဝန်ပေးအပ်ထားသည့် ဝန်ကြီးအဆင့် ကော်မတီမှလည်း မကြာသေးမီက ပထမအကြိမ် တိုးတက်မှု အစီရင်ခံစာကို ပြည်သူလူထုအား ထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့ကြောင်း၊ ရခိုင်ပြည်နယ်နှင့်ပတ်သက်၍ ပြန်လည် လက်ခံရေး လုပ်ငန်းစဉ်များ လက်တွေ့အကောင်အထည်ဖော်နေမှု အခြေအနေများကို ကိုယ်တိုင်လေ့လာသိရှိနိုင်စေရန် ကုလသမဂ္ဂ အေဂျင်စီများအပါအဝင် သံတမန်အဖွဲ့ဝင်များအား ရခိုင်ပြည်နယ်သို့ နေချင်းပြန် ခရီးစဉ်များ (၃) ကြိမ် စီစဉ်ပေးခဲ့ကြောင်း၊ ရခိုင်ပြည်နယ်တွင် လူမှုအသိုက်အဝန်းအားလုံး လူမှုဘဝများ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးနှင့် နေရပ်စွန့်ခွာသူများ ပြန်လည်လက်ခံရေးနှင့် ပြန်လည် နေရာချထားရေးအတွက် မြန်မာအစိုးရမှ ကြိုးပမ်းအကောင်အထည်ဖော်လျက်ရှိသည့် လုပ်ငန်းစဉ်များတွင် ကုလသမဂ္ဂ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအစီအစဉ်နှင့် ကုလသမဂ္ဂဒုက္ခသည်များဆိုင်ရာ မဟာမင်းကြီးရုံးတို့အနေဖြင့် ပါဝင်လက်တွဲ ဆောင်ရွက်ကြရန်လည်း မကြာသေးမီက ဖိတ်ခေါ်ခဲ့ကြောင်း၊ ရှင်းလင်းပြောကြားခဲ့သည်။
ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးမှ အရပ်သားများ၏ အင်အားကို အသုံးပြုကြသည့် အကြမ်းဖက်မှုများအား နှိမ်နင်းရာတွင် မလိုလားအပ်သော ထိခိုက်ဆုံးရှုံးမှုများနှင့် သေကြေဒဏ်ရာရှိမှုများ ဖြစ်နိုင်ပါကြောင်း၊ လူ့အခွင့်အရေး ချိုးဖောက်မှုများနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ခိုင်လုံသည့် အထောက်အထားရှိပါက အစိုးရအနေဖြင့် ကျူးလွန်သူ မည်သူ့ကိုမဆို ဥပဒေနှင့်အညီ စစ်ဆေးအရေးယူသွားမည် ဖြစ်ကြောင်း၊ ရခိုင်ပြည်နယ်အရေးကိစ္စနှင့်ပတ်သက်၍ လူမျိုးတုန်းသတ်ဖြတ်မှု (သို့မဟုတ်) လူအစုအလိုက်အပြုံလိုက် သတ်ဖြတ်ခြင်း စသည့် စကားလုံးများ သုံးစွဲနေမှုကို မိမိတို့အနေဖြင့် ပြင်းထန်စွာကန့်ကွက်ကြောင်း၊ ရခိုင်ပြည်နယ်ကိစ္စနှင့်ပတ်သက်၍ မြန်မာအစိုးရ၏ ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်မှုကဏ္ဍများတွင် နိုင်ငံတကာအသိုက်အဝန်းအနေဖြင့် အပြုသဘောပါဝင်မှုကို ကြိုဆိုသွားမည်ဖြစ်ပါကြောင်း၊ ရခိုင်ပြည်နယ်အရေးကိစ္စ၏ ရှုပ်ထွေးသိမ်မွေ့ နက်နဲမှုများအပေါ် နားလည်မှုရှိပြီး ရေရှည်တည်တံ့သည့် အဖြေတစ်ရပ် ပေါ်ထွက်ရေး အတွက် ကြိုးပမ်းရာတွင် အပြုသဘော အကူအညီများ ပေးနိုင်ပါကြောင်း၊ အပြုသဘောမဆောင်သည့် အရေးယူ ဆောင်ရွက်မှုများသည် ဆန့်ကျင်ဘက်သက်ရောက်မှုများကို ဖြစ်ပေါ်လာစေနိုင်ပြီး၊ လူမှုအသိုက်အဝန်းများအကြား ပိုမိုကွဲပြားမှုများကို ဖြစ်ပေါ်စေနိုင်ကာ ပြန်လည်ရင်ကြားစေ့ရေး ရေရှည်ကြိုးပမ်းမှုများကို ထိခိုက်စေနိုင်ကြောင်း၊ မြန်မာနိုင်ငံ၏ အသွင်ကူးပြောင်းရေးကာလတွင် လက်ရှိ အချိန်သည် စိန်ခေါ်မှုများ အမြင့်မားဆုံး ရင်ဆိုင်နေရသည့် အချိန်ဖြစ်ကြောင်း၊ မိမိတို့အနေဖြင့် ယင်းစိန်ခေါ်မှုများကို အမျိုးသား ပြန်လည်သင့်မြတ်ရေးနှင့် ငြိမ်းချမ်းရေးအတွက် အခွင့်အလမ်းများအဖြစ် ပြောင်းလဲကာ ဒီမိုကရေစီ အင်အားတောင့်တင်းရန်အတွက် ဆောင်ရွက်သွားမည် ဖြစ်ကြောင်းနှင့် ဒီမိုကရေစီ အသွင်ကူးပြောင်းမှု အောင်မြင်လာသည်နှင့်အမျှ အဆိုပါ စိန်ခေါ်မှုများကို ကျော်လွှား စေနိုင်မည်ဟု ယုံကြည်ကြောင်း ထည့်သွင်း ပြောကြားခဲ့သည်။
ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးသည် ဂျီနီဗာမြို့တွင် ရှိနေစဉ်အတွင်း ဖေဖော်ဝါရီလ ၂၆ ရက်နေ့တွင် လက်နက်ဖျက်သိမ်းရေးညီလာခံ၏ အဆင့်မြင့်ကဏ္ဍအစည်းဝေးသို့ တက်ရောက်ခဲ့ပြီး အနုမြူလက်နက်ဖျက်သိမ်းရေးနှင့် အနုမြူလက်နက်မပြန့်ပွားရေး ကိစ္စရပ်များနှင့် ပတ်သက်၍ မိန့်ခွန်းတစ်ရပ် ပါဝင်ပြောကြားခဲ့သည်။
ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးသည် ဂျီနီဗာမြို့၌ ဖေဖော်ဝါရီလ ၂၇ ရက်နေ့တွင် ကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာ မြန်မာအမြဲတမ်း ကိုယ်စားလှယ်/ သံအမတ်ကြီး ဦးထင်လင်းလိုက်ပါလျက် ဂျပန် နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ဒုတိယဝန်ကြီး Mr. Manabu Horii နှင့် ဗြိတိန် နိုင်ငံခြားရေးနှင့် ဓနသဟာရရေးရာဝန်ကြီးဌာန၊ ဒုတိယဝန်ကြီး Lord Ahmad of Wimbledon တို့အား သီးခြားစီ လက်ခံတွေ့ဆုံခဲ့ပြီး ရခိုင်ပြည်နယ်အရေး ကိစ္စနှင့်ပတ်သက်၍ မြန်မာအစိုးရ၏ ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်နေမှု အခြေအနေများကို ရှင်းလင်းပြောကြားခဲ့သည်။ အလားတူ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးသည် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာကြက်ခြေနီကော်မတီ (ICRC) ဥကဋ္ဌ Mr. Peter Maurer အားလည်း ICRC ဌာနချုပ်တွင် သွားရောက်တွေ့ဆုံခဲ့ပြီး လူသားချင်းစာနာ ထောက်ထားမှု အကူအညီပေးအပ်ရန်အတွက် မြန်မာအစိုးရ၏ ကြိုးပမ်း ဆောင်ရွက်မှုများတွင် ICRC မှ ပါဝင် ကူညီပေးနိုင်မှု အခြေအနေများကိုဆွေးနွေးခဲ့သည်။
ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးသည် ဖေဖော်ဝါရီလ ၂၈ ရက်နေ့တွင် ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံ၊ Bern မြို့ ၌ ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန၊ လက်ထောက်ဝန်ကြီး Mr. Johannes Matyassy နှင့် အတူ မြန်မာ-ဆွစ်ဇာလန်နှစ်နိုင်ငံ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနများအကြား ဒုတိယအကြိမ် ညှိနှိုင်းဆွေးနွေးပွဲကို ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့သည်။ ဆွေးနွေးပွဲတွင် မြန်မာ-ဆွစ်ဇာလန် နှစ်နိုင်ငံအကြား နိုင်ငံရေး၊ စီးပွားရေး ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုမြှင့်တင်ရေး ကိစ္စရပ်များ၊ ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံမှ မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးမဟာဗျူဟာ အစီအစဉ် သစ် (၂၀၁၉-၂၀၂၃ ခုနှစ်) အရ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုလုပ်ငန်းစဉ်များ ပိုမိုတိုးမြှင့်ဆောင်ရွက်ရေး၊ ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံအနေဖြင့် အာဆီယံ အဖွဲ့ကြီးနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု တိုးမြှင့်ရေးကိစ္စရပ်များ အပါအဝင် ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်း လူသားချင်းစာနာမှု အကူအညီပေးရေး၊ ပြန်လည်နေရာချထားရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ဆောင်ရွက်မှုနေမှုကိစ္စတို့ကို ဆွေးနွေးခဲ့ကြသည်။